Warshada Warshadaha iyo Warshadda Baabuurka ee Shiinaha ee Been Abuurtay. Hanvos
Magaca Badeecada Garbaha giraangiraha
Dhexroor 19-22 inji
ET -9 ~ 78mm
Ballaca 8.0 ~ 12.5
Gaari Sameynta Mid kasta
Tayo Tayo sare leh
Farsamada Been abuurtay
Cabir 19/20/21/22 inch
Tayo Gawaarida Daawaha ee Waxqabadka Sare
MOQ 4 Cadad
Damaanad 5 SANO
Qaabka Desgin Casri ah
Shahaadooyinka DOT / ISO TS16949
Midab Kordhinta Midabka
Abuur koox dooxada giraangiraha aad wax ka beddeshay Awoodda giraangirta giraangalka oo aad loo habeeyay, oo loogu talagalay baabuurkaaga. Xaddididda xuduudaha xoogga giraangiraha waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo la eegayo xogta gaarigaaga. Waxa kale oo aad dooran kartaa midabka culeyska giraangirta iyo tikniyoolajiyadda dusha sida aad doorbidayso, si gaarigaagu u noqdo mid shaqsiyeed.
Badbaadada iyada oo loo marayo hal -abuurnimadu waa ballan -qaadkeenna midba midka kale.
1. Waxsoosaarka OEM/ODM
2. Sample amar
3. Furitaanka habaynta / caaryada, iyo hoos u dhigista adeegyada maraakiibta
4. Waxaan kuugu jawaabi doonnaa weydiintaada 12 saacadood gudahood.
5. Ka dib dhoofinta, waxaan kuu raadin doonnaa macluumaadka dhoofinta badeecadda labadii maalmoodba mar ilaa aad ka hesho badeecadda. Markaad alaabta hesho, fadlan tijaabi oo na sii warcelin. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan nala soo xiriir annaguna waxaan ku siin doonnaa xal.
Damaanad -qaadku wuxuu ku fidaa oo keliya iibsadaha asalka ah oo wata caddayn iibsi iyo baabuurkii asalka ahaa ee alaabta lagu rakibay. Dammaanadda lama wareejin karo waxayna shaqaynaysaa 12 bilood laga bilaabo taariikhda rakibidda. Dhammaan khidmadaha maraakiibta iyo khidmadaha waajibaadka ee la xiriira dammaanad -qaadkan ayaa ah mas'uuliyadda keliya ee macaamilka.
Marka la helo badeecadaha, waa mas'uuliyadda shaqsiyeedka iibsadaha inuu baaro xaaladaha qaybaha ka hor rakibidda. Haddii qaybo ka mid ah cillad ku timaadda maaddada iyo/ama farsamada gacanta, iibsaduhu waa inuu diiwaangeliyaa cilladaha, isla markiiba nala soo xiriir oo ku soo celi badeecadda 30 maalmood gudahood. Waxaan ku beddeli doonnaa dhammaan walxaha cilladaysan lacag la'aan, laakiin kharashka gaadiidku wuxuu noqon doonaa kharashka iibsadaha.
Dammaanadda waxaa loo tixgelin doonaa mid madhan haddii waxyeellada alaabta ay sabab u tahay rakibid aan habboonayn iyo/ama adeegsi aan habboonayn, oo ay ku jirto, laakiin aan ku xaddidnayn: waddada ka-baxsan, tartanka, wax-ka-beddelka aan la oggolayn ee alaabta, daryeel la'aan, waxyeellada waxyeelada iyo waxyeello kasta oo kale Waxaa sabab u ah isticmaalka badeecadaha aan ahayn kuwa loogu talagalay soo-saaraha. Mas'uul kama noqon doonno waxyeello kasta oo maalin kasta soo gaarta oo ka dhalata xaaladaha wadista caadiga ah; oo ay ku jiraan, aan ku xaddidnayn: waxyeellada aadamigu sameeyay ama dabiiciga ah ee dusha sare, xumaanshaha gudaha, midab-doorsoonka, miridhku iyo daxalka. Xirashada iyo oohintu waa lama-dhaafaan; waxaan kugula talineynaa baaritaanno joogto ah iyo daryeel si loo kordhiyo badeecadaha noloshooda iyo joogtaynta waxqabadkeeda.
Hore: Baabuurka Aluminiumka been -abuurka ah ee Baabuurka Ganacsiga
Xiga: Been Abuurtay 5 Af -hayeenka Afka Alwaaxa Alwaaxa
Kartoo Wheel Steel Wheel la sax Ma ...